theZOMI: Burma News International - April 8, 2013
Burma News International - April 8, 2013
President Thein Sein concluded his China visit withaspeech at the opening of the Boao Forum for Asia Annual Conference 2013 in Hainan on Sunday.
Golden Myanmar Airlines have launchedanew daily route connecting Mandalay with Singapore's Changi Airport.
Disputes over land issues have increased in the Hpa-an Town region in Karen State since the establishment of economic zones andarush to start ‘development projects’ in the area.
Villagers in Hpa-an Township, Karen State say for the first time in memory Government officials have involved them in discussions aboutadevelopment project planned for their area. Villagers’ say an assessment was carried out and they were consulted with overadevelopment project before it started.
Shan rebels-Burma army clash, thousands flee
It is reported that due to recent clashes between, Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA) and Burma army in the Loi Zay region, Tangyan Township in northern Shan State, thousands local people in the region are fleeing to the township seat.
Suspects arrested in connection with October sectarian violence in Arakan state have been released
Several Arakanese Buddhists arrested by police after sectarian violence erupted in Arakan state last October have been freed by authorities, saidasenior lawyer in Sittwe.
Thousands of Rohingya refugees living in unofficial refugee camps in Bangladesh are suffering from malnutrition and even starvation, according to Nuru who lives in one of the camps.
UNFC ကိုယ်စားလှယ်များ ဒုတိယအကြိမ် ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးဆုံး
ဂျပန်နိုင်ငံ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ကိုယ်စားလှယ်တို့၏ ဒုတိယအကြိမ်ခရီးစဉ် ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဟု သိရသည်။
စစ်ရေး တင်းမာမှု လျှော့ချရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီဝင်များနှင့် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSA/SSPP) ခေါင်းဆောင်များ လားရှိုးမြို့တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ နေရပ်မပြန်နိုင်သေးကြောင်း ဒေသခံနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီများထံမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများအားတွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ ငြိမ်းချမ်း စွာ အဖြေရှာနိုင်ရေး၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေး၊ လူနေမှုဘဝ မြင့်မားရေး ကဏ္ဍများတွင် ဆက်လက် ကူညီသွားရန် ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး က ကတိပြု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တဦး ဖြစ်သူ နိုင်ဟံသာ (ဗိုန်ခိုင်) က ပြောသည်။
တန့်ယန်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအားလုံး ကျောင်းတိုက်တခုတည်း၌ စုပုံထား
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ရွှေလီမြစ်တဘက်ကမ်းရှိ RCSS/SSA သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ထိန်းချုပ်ရာ အမှတ် ၇၀၁ စစ်ဒေသဌာနချုပ်တွင် ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများအား အများပြည် သူလူထုရှေ့တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရုတ်ကုမ္ပဏီကိုဆန္ဒပြရန် မဒေးကျွန်းသားများအား အစိုးရ ခွင့်ပြုချက်ပေး
ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်း အဓိက တည်ရှိရာ ကျောက်ဖြူ မဒေးကျွန်း ဒေသခံများက တရုတ်ကုမ္ပဏီအား ဆန္ဒပြရန် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရထံ ခွင့်ပြုချက်တင်ထားရာ ယခုအခါ အစိုးရမှ ခွင့်ပြုချက် ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မီးဘေးသင့်ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ထိုင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုးချ
ကရင်နီဒုက္ခသည် အမှတ် ၂ စခန်း မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် စခန်းအတွင်းကို လူသားချင်းစာနာသူတွေက နေ့စဉ် အ၀င်အထွက်ပြုလုပ် လာခြင်းကြောင့် မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်၊ ခွန်ယွန်းမြို့နယ် တာဝန်ရှိသူတွေက သွားလာခွင့် တင်းကြပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ စခန်းကော်မီတီ ဥက္ကဌ ဆရာမ ရှယ်လီသန်းက အခုလိုပြောသွားပါတယ်။